रिसायो नारायणी ! सबै बगायो के भयो यस्तो ? (हेर्नुस् भिडियो) – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /Video/रिसायो नारायणी ! सबै बगायो के भयो यस्तो ? (हेर्नुस् भिडियो)
चितवन। जिल्लामा रहेका दुई ठूला नदीमा आज पाँच जनाको श’व फेला परेको छ ।जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका अनुसार नारायणी नदीमा चार जनाको र राप्ती नदीमा एक जनाको श’व फेला परेको हो ।वर्षा रोकिएर नदीको बहाव घटेसँगै किनारमा तैरिएको अवस्थामा श’व भेटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक सूर्यबहादुर थापाले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार भरतपुर महानगरपालिका–१ ठिमुरामा दुई जनाको बेवारिसे शव फेला परेको छ । तीमध्ये एक जना अन्दाजी १५ वर्षीया बालिका र अर्का ५५ वर्षीय एक पुरुष रहेको छ । ती श’व स’डेको अवस्थामा फेला परेका हुन् ।त्यस्तै भरतपुर महानगरपालिका–१६ का ४० वर्षीय सानो कान्छा भन्ने कर्णबहादुर सुनारको श’व आज फेला परेको छ । मङ्गलबारदेखि उनी बे’पत्ता भएका थिए । उनको वडा नम्बर १६ कै झनझने भन्ने ठाउँमा श’व भेटिएको हो ।
भरतपुरकै वडा नम्बर १ गैँडाचोकस्थित नारायणी किनारमा अन्दाजी ५० वर्षीया एक महिलाको श’व फेला परेको छ । त्यस्तै पूर्वी चितवनको खैरहनी नगरपालिको बूढी राप्ती खोलामा बगाएर ल्याएको अन्दाजी ५० वर्षीय पुरुषको श’व भेटिएको उनले जानकारी दिए। बग्दै गरेको श’व देखिए पछि स्थानीयवासीको सहयोगमा प्रहरीले नदी बाहिर निकालेका थिए । एक जनाबाहेक अन्यको स’नाखत हुन सकेको छैन ।
विभिन्न ठाउँमा बगाएको वा पुरेको ठाउँबाट बाढीले श’व बाहिर ल्याएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । मुचुल्का गरेर श’व परीक्षणका लागि भरतपुर अस्पताल ल्याइएको प्रवक्ता थापाले जानकारी दिए ।